भोली असार १७ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
June 30, 2020 1533
मेष राशि : दाम्पत्य जीवनमा कुनै पनि समस्या थियो भने कम भएर जानुका साथै विवा’हको लागि कुरा अगा’डी बढ्ने देखिन्छ । नयाँ कामको अवस प्राप्त हुनसक्छ । काममा सफलता हात पर्ने छ ।
वृष राशि : कसै सँग पैसा वा केही सापटि चलाउनु भएको छ भने चाढै तिर्नु होला अन्यथा सम’स्या वा फस्न सक्ने सम्भाव’ना छ । स्वास्थ्यले भने दुःख दिने नै छ सम्यमता अपनाउनु राम्रो हुनेछ ।
मिथुन राशि : प्रेमलाइ वि’वाहमा परिणत गर्न चाहानु हुन्छ भने राम्रो समय छ कुरा अगाडी बढाउनु नै उचित देखिन्छ । धन लाभको साथै सन्तान वाट सुख सुविधा प्रात्त गर्न सक्नु’हुनेछ । विदेश यात्राको अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।
कर्कट राशि : आमाको स्वस्थ्य’मा भएको समस्या कम भएर जानेछ । घर परिवार तथा साथीभाइ सगँको सहयोग वा मम’ताको कारणले गर्दा मन प्रसन्न रहने छ । आर्थिक लाभ&को पनि सम्भावना छ ।
सिंह राशि : घर परिवा’रमा मत मतान्तरको वातावरण वन्नुका साथै व्यपार व्यवसायवाट लाभ प्राप्त हुन सक्छ । जागिर’मा पदोन्नति:को साथै नयाँ काम पाउने सम्भावना छ । दाम्पत्य जीवन राम्रो भएर जानेछ ।
कन्या राशि : दाँत वा मुखमा कुनै घा’उले सताउन सक्नेछ । नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुनुका साथै वैदेशिक यात्राको अवसर प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । लामो स’मयदेखि रोकिए’को काम बन्नेछ भने नया काममा केही ढिला हुन सक्छ ।
तुला राशि : व्यत्तित्वको प्रभाव वढ्नुका साथै मान सम्मा:नमा वृद्दि हुनेछ । तपाइको पराक्रम देखेर अरु’लाइ तपाइप्रति लोभ लाग्न सक्छ । काममा जानु पूर्व भने गणेश भगवानको दर्शन गरेर जा’दा राम्रो हुनेछ।
वृश्चिक राशि : आउदै गरेको धन रो’किन सक्नेछ भने नयाँ ठाउँमा लागानी गर्नु पूर्व धेरै सोच विचा’र गर्नु होला । साथी’भाइलाइ धेरै विश्वास गरेर गोप्यकुरा भन्नाले काममा वा धनमा वाधा हुनेछ ।
धनु राशि : धन ला’भको साथै अचल सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्नेछ । व्यपार व्यवसाय वाट पनि पनि मनग्गे आम्दानी हुन सक्नेछ ।दाजु’भाइको साथ र सहायेगले रो’किएको काम वन्नेछ ।
मकर राशि : यात्रा गर्ने अव’सर मिल्नुका साथै विदेश वाट लाभ प्राप्तहुन सक्छ । काममा पदोन्तीको सम्भावना छ । व्या’पार वाट राम्रो लाभ हुन सक्छ । फसेको धन आउने सम्भा’वना देखिन्छ ।
कुम्भ राशि : धार्मिक यात्रा’को अवस प्राप्त हुनुका साथै घरमा वा नयाँ ठाउमा मांगलिक कार्यमा सरिक भएन सक्नेछ । आ’र्थिक लाभ हुनुका साथै काममा ठुलो सफलता हात पर्ने छ ।
मीन राशि : अरुको विस्वा’स गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्नु होला अन्यथा विश्वासघात हुन सक्छ । वैदेशिक यात्राको अवसर प्राप्तहोला । आर्थिक लाभ दिनको अन्त्यमा भने हुन सक्नेछ । जागिरमा पदोन्नति’को सम्भावना छ ।
Prevस्व. पत्रकार कृष्णबाबुको कार दुर्घ’टनाको सिसी टिभी फुटेज बाहिरियो (भिडियो सहित)
Nextकागले खायो काठ’माडौं आएका सलह कीरा…हेर्नुहोस्
सुनको मूल्य तोलामा ६ हजार घट्यो, अब कति पर्छ तोलाको ? हेर्नुहोस्
यी किशोरीको भिडियो टिकटकमा भाईरल, के छ त यो भिडियोमा ? (भिडियो सहित)
महिला मन्त्रीले दिइरहेकी थिइन् अन्तरवार्ता, छोराले क्यामरामा देखाउन थाले पुरुषको अंग जस्तो गाँजर (भिडियोसहित)
एमालेका सुवेदीलाई उछिन्दै रेणु दाहाल बढिन् अघि
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (136425)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (115410)